कांग्रेस कहाँ छ ? - Nayabulanda.com
हरि रोक्का ५ बैशाख २०७८, आईतवार ००:११ 113 पटक हेरिएको
‘नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्र (जनतन्त्र) तथा अध्यात्मको हत्या गरेर समाजवादको स्थापना गर्ने कार्यको विरोध गर्छ । कांग्रेसको के विश्वास छ भने, समाजवाद प्राप्त गर्न जनतन्त्रवादको विनाश अपरिहार्य हुँदैन । साँचो समाजवादी समाजको निर्माण समाजवाद र जनतन्त्रको गठबन्धन बीचमै हुन सक्छ । अत: नेपाली कांग्रेस शान्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक उपायमार्फत नै समाजवाद स्थापना गर्न चाहन्छ ।’ कांग्रेस किन समाजवाद चाहन्छ ? घोषणापत्र (पृष्ठ ८–१४) भन्छ, ‘यो स्वयंसिद्ध तथ्य हो, प्रत्येक व्यक्तिको एक हदसम्म मौलिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार प्राप्त गर्न आवश्यक हुन्छ जहाँ ऊ फल्न र फुल्न सकोस् । …त्यो समाज जो हामी ल्याउन (निर्माण ?) गर्न चाहन्छौं, त्यहाँ समान अवसर र समान स्वतन्त्रता रहन्छ । …जन्म या वर्गको कारण कुनै भिन्नता रहनेछैन । समाजसेवाका लागि समान अवसर प्राप्त हुनेछ । एक व्यक्ति अर्को व्यक्तिलाई वा एउटा वर्ग अर्को वर्गलाई शोषण गर्न सक्नेछैन । सबैका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यको समुचित प्रबन्ध गरिनेछ । बेरोजगारी हुनेछैन, बेरोजगारीको भयले कसैलाई सताउनेछैन । सामाजिक सम्बन्ध सुदृढ गर्नमा विरोधीका लागि पनि स्थान हुनेछ । राष्ट्रिय धनको उत्पादनमा कोही व्यक्तिको व्यक्तिगत लाभका लागि होइन, सबैको भलाइका लागि गरिनेछ । जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि उसको सांस्कृतिक विकासको व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो समाज निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेस प्रयत्नशील रहनेछ ।’
२०१२ सालको घोषणापत्रको पृष्ठ ५ को सुरुकै हरफमा लेखिएको छ, ‘…यो समय क्रान्तिको गति बहुत धीमा गतिमा चलिरहेको थियो र राजदरबारमा प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिको सहयोगमा षड्यन्त्र र हस्तक्षेपको माध्यमबाट सरकारमाथि पूर्ण अधिकार गर्ने प्रयत्न गरियो । मान्छेहरूले राजतन्त्रको वैधानिक पृष्ठभूमि भुल्दै जाँदा महाराजाधिराज सावधानीपूर्वक भूतपूर्व राणा प्रधानमन्त्रीको स्थान ग्रहण गर्दै सर्वसत्तात्मक शासक बन्न पुगे ।’ यसको सीधा अर्थ थियो— मातृकाप्रसाद कोइराला राजाको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न षड्यन्त्रमा सामेल थिए । उनको क्रियाकलाप सहिद, समग्र आन्दोलन, पार्टी र आम जनताविरुद्ध धोकाधडी थियो । धेरै भाषामा कमान्ड भएका, विद्वान्मा गणना हुने मातृका नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनमार्फत खोजेको साँचो परिवर्तनको पक्षधर थिएनन् । बीपीले आफ्ना दाइलाई यसरी चिनाइरहँदा आफैंभित्र हुर्किरहेका अन्य विषवृक्षमाथि छाम्न सक्नुभएनछ । २०१७ सालमा राजाले तिनै विषवृक्षहरूको सहयोग र षड्यन्त्रमा ‘कू–देता’ गरेका थिए ।